Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Southwest Airlines yazisa uMongameli omtsha
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
UMike Van de Ven utyunjwe njengo-Mongameli weNkampani, ukuqala ngokukhawuleza.
U-Gary Kelly, uSihlalo we-Southwest kunye ne-CEO, ubhengeze egameni leBhodi yabaLawuli beeNqwelomoya yase Mzantsi ukuba iGosa eliyiNtloko lokuSebenza uMike Van de Ven, 59, wabizwa njengo-Mongameli weNkampani, osebenza kwangoko. UVan de Ven uzakuthatha uxanduva olongezelelekileyo loPhicotho lwaNgaphakathi lweNkampani, ukuQhubeka kweShishini, ukuphendula ngokukhawuleza, kunye nemisebenzi yoLawulo loMngcipheko kuShishino.
Utshintsho lobunkokeli lubhengezwe kwi-Southwest Airlines.
UTom Nealon uthathe isigqibo sokuthatha umhlala phantsi kwimisebenzi yakhe njengoMongameli ngokukhawuleza.
ISouthwest Airlines Co ibhengeze utshintsho kubunkokeli namhlanje.
UTom Nealon, 60, uthathe isigqibo sokuthatha umhlala-phantsi njengo-Mongameli ngokukhawuleza, kodwa uya kuqhubeka nokusebenzela iNkampani njengomcebisi weqhinga, ejolise ikakhulu kugcino lwenqwelomoya kunye nokusindiswa kokukhutshwa kwekhabhoni. UNealon ubambe izikhundla ezininzi zobunkokeli ngexesha lokuhlala kwakhe nenqwelomoya, kubandakanya neQela likaMongameli oLawulayo kunye ne-Innovation ukusukela ngo-2016 ukuya ku-2017, uMlawuli kwiBhodi yoMzantsi-ntshona ukusuka ngo-2010 ukuya ku-2015, nakwisikhundla sokuba ngumcebisi njengo-Sekela Mongameli oPhezulu kunye neGosa loLwazi eliyiNtloko ukusukela ngo-2002. ukuya ku-2006.
Ndonwabile ngokusebenzela uMzantsi-ntshona kuyo yonke le minyaka kwizikhundla ezahlukeneyo, ngakumbi ukuba ndibenguMongameli wenqwelomoya ehamba phambili kwezorhwebo, utshilo uNealon. "Ndijonge phambili ekuqhubekeni ndikhonza kwaye ndicebisa uMzantsi-ntshona ngamanyathelo acwangcisiweyo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, kwizicwangciso zeenqwelo moya zexesha elide zokuzinza kokusingqongileyo."
UGary Kelly, uSihlalo we-Southwest kunye ne-CEO, ibhengezwe egameni le Southwest Airlines IBhodi yaBaphathi ukuba iGosa eliyiNtloko eliSebenzayo uMike Van de Ven, 59, utyunjwe njengo-Mongameli weNkampani, ukuqala ngokukhawuleza. UVan de Ven uzakuthatha uxanduva olongezelelekileyo loPhicotho lwaNgaphakathi lweNkampani, ukuQhubeka kweShishini, ukuphendula ngokukhawuleza, kunye nemisebenzi yoLawulo loMngcipheko kuShishino.
“Ndifuna ukubulela uTom ngegalelo lakhe elingabalekiyo kwi-Southwest Airlines kule minyaka idlulileyo — zininzi kwaye azinakulinganiswa. Ndiyabulela uTom ukuba aqhubeke nokusebenza njengomcebisi weqhinga. Ndonwabile ngoMike xa ethatha indima yakhe entsha njengoMongameli, ukongeza kwi-COO. UMike unetalente kwaye uzinikele kwinkokeli njengoko umntu eya kuyifumana, kwaye unegalelo ngqo kwimpumelelo yoMzantsi-ntshona kwisithuba seminyaka engama-28 ekhonza iNkampani kunye naBantu baKho.
"Iinzame zotshintsho ezikhokelwa ngu-Sekela Mongameli oLawulayo kunye ne-CEO engenayo u-Bob Jordan zihamba kakuhle kakhulu, kwaye njengoko oko kuqhubeka, sithatha amanyathelo okutshintsha iindima zokuxela ukulungiselela uBob ukuba athathe indima ye-CEO ngo-1 kaFebruwari 2022," utshilo. UKelly.
Njengoko uguquko luqhubeka, amaqela ezeMali, ezoRhwebo, ezoMthetho kunye neMiqathango, ukuSebenza, kunye neTekhnoloji awayexela uKelly okanye iNealon ngoku aza kunika ingxelo eJordani, nayo isebenza kwangoko.
"Egameni leBhodi yaBalawuli, ndingathanda ukubulela uTom malunga neminyaka emihlanu yokuhlala njengo-Mongameli kunye neminyaka engaphezulu kwe-15 esebenza kubasebenzi bethu baseMzantsi-Airlines, abaThengi, Abanini zabelo kunye nabahlali esibasebenzelayo," utshilo. UMlawuli oyiNtloko weeNqwelomoya kwi-Airlines uWilliam Cunningham. “Siyazingca kakhulu ngokuba nesitulo sobunkokeli esinetalente nesomeleleyo eSouthwest Airlines, kwaye kuyasivuyisa ukubhengezwa kukaMike Van de Ven njengelandela likaTom.”
IHeathrow: Ukuvalwa kweenqwelomoya zeTransatlantic zibiza i-UK ...
Inkanyamba enamandla itshabalalisa iilali, yenzakalisa amakhulu ...